wo Modes: Mode 1 dia ahafahanao maka sary maimaim-poana ary manakoako ny feo mampihetsi-po mora ho azy amin'ny sd card, midira ao amin'ny mode 2 ho an'ny horonantsary fandraiketana ary hamonjy amin'ny karatra sd. Jereo ireo rakitra rehetra ao anatin'ity karatra ity, ampiasao ny mpamaky karatra, na asio ny penina ao amin'ny solosainao.
No Software: Ity pensilihazo ity dia PC sy Mac Compatible. Ny mari-pamantarana daty dia azo ampiasaina ho toy ny mari-pamantarana hafa amin'ny rakitsary na sary, noho izany ny fandaminana ny rakitrao dia ny rivotra. Ny fakan-tsarin'ny mpitsikilo finday dia narahina ny fenitra famokarana ambony indrindra.
Adihevitra ambony ho an'ny sary sy lahatsary: Full HD 1920x1080p ho an'ny VIDEO & 2560x 1920p ho an'ny PHOTO. Ny HD-9712 HD feno, 8 mega pixels, ny Hardware dia mahatratra ny HD tanteraka. Kitiho iray monja amin'ny tsindry iray monja dia ahafahanao manomboka / manakana ny horonantsary avy hatrany.
Battery: Ny batterie Lithium natsangana, 100% azo averina, avo lenta (DC-5v) dia mihoatra noho ny penina fandraisam-peo hafa misy. REHEFA REHEFA NA MANDAITAN'NY RÉOMA ianao.
Penina tsy manam-paharoa ity. Ie tsy vitan'ny fanoratana fotsiny fa koa ny DVR namboarina (Digital Video Recorder) misy fakan-tsary HD izay azo ampiasaina hanangonana / hamoronana sary sy horonantsary avo lenta. Izy io no penina fakan-tsary mangatsiatsiaka indrindra izay manam-pahaizana amin'ny fanaraha-maso sy fisamborana ny toe-javatra rehetra na toy ny fanomezana mahafinaritra fotsiny.
INONA NO MISY AMIN'NY BOX?
Fiarandalamby / data USB Extension Cable
Ampiasao amin'ny tanana amin'ny Standby Mode izany hahafahanao maka sary na dia tsy eo aza ianao
manome 60 - 90 minitra ny asa fananganana dizitaly.
Memory: Ex-slot amin'ny fanohanana karatra micro SD / TF ho an'ny 32GB
Ampiasao ny sary, ny horonan-tsary, na ny flash-jiro.
Misy ny Charging / Data USB Extension Cable.
USB karazana: Port USB standard.
Support System: Fanohanana WINDOWS98 / 98SE / ME / 20000XP / MAC OS / LINUX ary manavaka ny solosaina fichier automatique, mametraka fiara tsara tarehy, tsy mila mametraka tanana (afa-tsy WINDOWS98).
SPY008 - Sarin'ny fakantsary pen
5438 Total Views 1 Views Today